शरणको शरणमा सबै भिजेका बिराला
आरोप प्रत्यारोपका क्रममा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुले एक अर्कालाई कठपुतली भन्न पनि छुटाउन्नन् । उस्तै परे विपक्षी पार्टीलाई अराष्ट्रिय भन्न पनि पछि पर्दैनन् । राष्ट्रियताको सवालमा भने को भन्दा को कम भनेजस्तो गरी तर्क गछ्रन् । के गर्नु, तर्क, तर्कमै सीमित भएपछि । भाई फुटे गवार लुटे भन्ने शब्दावली निकै प्रचलनमा ल्याइदिएका छन् ।
तीनतीनपटकसम्म प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेपछि कुरा मिलाइदिन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत आएका छन् । डा. मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रुपमा काठमाण्डौ आएका भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले राजनीतिक भेटघाट तीब्र पारेका छन् । शरणले आएकै साँझ सहयात्री दलहरु मधेशवादी दल र सूबथा टोलीलाई रात्रिभोज समेत खुवाउन भ्याए भने ठुला दलसँग दिनभरजसो भेट गरे ।
आफ्नो भ्रमणको उदेश्य नेपालमा सरकार गठन र विघटन नभएको दावी समेत गर्न भ्याए उनले । यो कुरा उनले कुटनीतिक मर्यादालाई ध्यानमा राखेर भने होलान् । तर यो लुकाउनुपर्ने कारणै छैन । किनभने नातिनीको बिहेमा उनी आएका हैनन् । नेपालका भाइभाइ फुट्दा जुटाइदिन भन्दै आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन आएका हुन् ।
बरु माओवादी र काँग्रेसका उम्मेदवारलाई मधेशवादी दल र एमालेका सभासदले क्रस भोटिङ गर्ने सम्भावना बढेपछि सहमति गराउने नाममा हस्तक्षेप गर्न उनी आएको स्पष्टै छ । बरु अरुबेला सीमामा समेत पुग्ने माओवादीले सरकार गठनको मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप नस्विकार्ने बताईरहेको भएपनि शरणसँग के बतायो गर्भमै छ । भन्न सक्नुपथ्र्यो नि, शरणको शरणमा पर्नु छैन भनेर । के गर्ने बहुमतको लडाइँ लड्दा लड्दै पसिनाले निथ्रुक्क भिजेपछि उपाय नै के थियो र ।
यो कुरा माओवादीमा मात्र होइन, काँग्रेसमा पनि लागु हुन्छ । काँग्रेसले पनि भन्न सक्नुपथ्र्यो कि भारतकै कारणले नेपालमा अस्थिरता फैलिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा तीनतीन पटक चुनाव गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । चुनाव हुनेबेलामा दलका नेताका कानमा अनेक कुरा फुक्ने अनि कहाँबाट हुन्छ भनेर निहुँ खोज्नुपर्छ नि । के गर्नु, भविष्यको धेरै चिन्ता लागेपछि । भविष्यको कुरा जे होला, होला, अहिलेको चिन्ता गरे त हुन्थ्यो नि । चौथो पटक पनि चुनाव व्यर्थै हुने देखिएपछि सातो गएको हुनुपर्छ नेताहरुको । - महेन्द्र ।
August 01, 2010 7:09 am
वरिष्ठहरुले बढ्न दिने हुन् कि फेरि दबाउने ?
हुने विरुवालाई दबाउने चलन नेपाली संगठनहरुमा, खासगरी राजनीतिक संगठनहरुमा निकै अघिदेखिको हो । जुनसुकै वयोवृद्ध नेताले पनि मरुन्जेल नै पदमा बसिरहुँजस्तो गर्छन् । यही कारण पनि अधिकांश दलहरुमा युवाको नेतृत्व देख्न कठिन पर्छ । दलहरुमा वयोवृद्ध नेताहरुको साथ लियो भनेर बढी आलोचना खेप्ने गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस हो ।
त्यही नेपाली काँग्रेसले १२ औं महाधिवेशनका लागि ६१ जिल्लाबाट महाधिवेशन र महासमिति सदस्य चयन गरेको छ । ६१ जिल्लाका सबै क्षेत्रमा भएको क्षेत्रीय अधिवेशनमा धेरैजसो ठाउँमा चुनावी प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिहरु चयन भएका छन् । त्यसमा पनि अधिवेशनबाट अधिकांश स्थानमा युवा अनुहारहरु निर्वाचित भएका छन । नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दल जस्ता भ्रातृसंगठनका कार्यकर्ताहरु स्थानियस्तरको नेतृत्वमा उत्साहजनक ढंगले निर्वाचित भएका छन् ।
वास्तवमा यो अधिवेशनबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य र प्रतिनिधिहरुले अब भदौमा कस्तो नेतृत्व छान्छन्, त्यसैमा काँग्रेस र त्यसमा आस्था राख्नेहरुको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । भदौ १० देखि राजधानीमा सुरु हुने पार्टीको १२ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेकाले कोइराला र देउवाबीच गाउँ अधिवेशनदेखि नै आ-आफ्ना पक्षमा प्रतिनिधिहरु ल्याउन चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
यो प्रतिस्पर्धा भने दुःखको कुरा हो । हो, युवाहरुका लागि स्थान दिए त राम्रै कुरा हो । तर उनै पुराना नेताहरु नै भाले हुन खोजे भने त्यो दुर्भाग्य नै होइन भन्न सकिन्न । महाधिवेशनका लागि प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा दुइ महिला, एक दलित, एक आदिवासी जनजाति, एक मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ । यसले महाधिवेशनमा कम्तीमा ५ सय महिला निर्वाचित भएर आउने छन् ।
समावेशीको यो तरिका भने राम्रो छ । तर कुरा उही ठाउँमा आएर अड्किन्छ कि वरिष्ठ भनिने नेताहरुले स्थान दिन्छन् कस्लाई । भनौं एकपटक स्थापित भएका नेताहरुले पाइरहेको जिम्मेवारी छोडेर युवालाई भन्दैमा त्यत्तिकै छाड्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । तर महाधिवेशन लाई अवसरमा रुपमा लिएर युवाहरुले पनि जागरुकता देखाउनुु जरुरी छ भने बुढा नेताहरुले पनि बाटो छाड्नु उपयुक्त हुन्छ । - महेन्द्र ।
राजनीतिमा पकड जमाउन सफल प्रधानमन्त्रीको खैलाबैला
तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पनि निर्णायक हुने लक्षण नदेखिएपछि के सडक, के दलका कार्यालयहरु, के संसद के सिंहदरबार, अनि के चिया पसल सबैतिर को हुने प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा बहसतले तीव्रता पाएको छ । केही समयसम्म जो प्रधानमन्त्री भएपनि के मतलब भन्नेहरु पनि प्रधानमन्त्री कस्ले चड्काउने हो भन्ने विषयलाई लिएर बहसमा देखिन्छन् ।
हुन पनि पटकपटक निर्वाचन हुँदा पनि निणिर्त बन्न नसकेको यस विषयमा चर्को बहस हुनु त्यति अस्वभाविक पनि थिएन कि ? बरु स्वभाविक त नेताहरुले खाने गाली पो बनेको छ । असार १६ पछि देश सरकारविहिन बनेपनि यसको रिक्तता पुरा गर्नका लागि पटकपटक बहस र चुनावमा जुट्दा पनि सफलता हात नलागेपछि आखिर आलोचना नै हो हात लाग्ने । त्यसमा पनि विवादित नेताहरुका कारण ।
मुख्य दल र नेताहरुबीचमै भुइँचालो गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एमाले पनि त्यो अवसरबाट मुक्त हुने अवस्था रहेन । यही क्रममा साउन १७ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा एमाले भित्र विवाद बढेको छ । एमालेका बरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर काँग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण मिलाउने पहल गरिरहेको छ भने अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतम कुनै हालतमा पनि तटस्थ बस्न यसअघि लिएको निर्णय नफेर्ने अडानमा छ ।
यहीं त मुख्य गाँठो, त्यो पनि काँग्रेसका लागि । बरु माओवादीका लागि भने मधेशवादी दलहरुको मागमा छ गाँठो । बरु समुहगत रुपमा मधेशीलाई सेनामा लैजाने भन्नेजस्ता मागले पो मुख्य दलहरुलाई चुप लागेर बस्ने बनाएको छ । बिचरा चुप पनि कति लाग्नु, प्रधानमन्त्री चयन नहुनुमा माओवादी काँग्रेस भन्दा पनि बढी जिम्मेवार त अब मधेशवादी दल र एमाले पो देखिन थालेका छन् । त्यही भएर नै हुनुपर्छ, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालविरुद्ध अदालतमा रिट नै पर्‍यो, दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन नहुने भन्दै ।
कसैले भन्छन्, यो राजनीतिक चरित्रका लागि लिएर मुख्य दलहरुबीचको विवाद हो । उदाहरणका लागि एकीकृत माओवादी नागरिक पार्टी नबनेको वा काँग्रेस पुरातनवादी पार्टी बनेको । त्यस्तै, मुख्य नेताहरुबीच पदलोलुपको रोग लागेकोले यो अवस्था आएको भन्नेको संख्या पनि सानो छैन । आखिर के हो त, यो लडाइँ, कि यो संसदीय प्रणालीमा हुने सामान्य खालको विवाद, यसबारे स्पष्ट भएर आफ्नै पाटीै भित्र र बाहिर विवाद गर्नु पो उपयुक्त हुन्थ्यो कि ? - महेन्द्र ।
जति नभन्न खोजेपछि तथ्य, तथ्य नै हो
देशको सार्वभौम संविधानसभाअगाडि अर्थात संविधानसभा भवनअगाडि बसेर भारतीय राजदूतबाट नेपाली राजनीति अर्थात पछिल्लो समयमा सरकार गठनको कुरा निर्धारण हुन्छ भन्नु त्यति मनले मान्ने कुरा हुँदै होइन । तैपनि बाढीमा डुबेको बेलामा भिजेको छैन भनेर भन्न मिलेन क्यारे । भिजेर चिसो लागेपनि वा मौसम परिवर्तनको असरबारे सचेत नभएर वा जे भनेर भएपनि नबोली सुखै नभएजस्तो नयाँ सरकार गठनबारे भारतको भूमिकाबारे पनि बोल्नैपर्ने ।
केही पत्रकारसामु भारतीय राजदुत राकेश सुदले बुधबार भएको प्रधानमन्त्रीको पहिलो चुनाउअघि केही नबोल्ने बताउका थिए रे । पत्रकारसँग नबोलेर के गर्नु, बोल्नुपर्नेहरुसँग कानेखुशी गरेपछि पुगिहाल्दो रहेछ । अर्थात सुदले पत्रकारसँग चुइँक्क नबोलेपनि नेपाली नेताहरुसँग भने बोलेकै छन् । भेट्न आउनेहरुसँग पनि । त्यो पनि लैनचौरस्थित दुतावासमा ।
संसदमा बहुमतको जोडघटाउ चलिरहँदा त्यस्तै हल्ला आयो । एकीकृत माओवादीका केही नेता मधेशवादी दलसँग अनि केही नेता भारतीय राजदुतावासको सम्पर्कमा थिए रे । मधेशी मोर्चाले भारतीय राजदुतावासको इशारामा बाहेक कतै नडग्ने भन्ने धेरैको अनुमानकै पत्तो पाएर हो कि, माओवादी नेताहरु पनि त्यसै गरेका ? मधेशी मोर्चासँग भेटबारे सबैलाई थाहा भएपनि राजदुतको दर्शनबारे प्रमाण नै नभएपनि घटनाक्रमले कुरो त्यही हो भनेर लख काट्न बाध्य बनाएका छन् ।
भारतले नमान्दा मधेशी दलहरुले एकीकृत माओवादीलाई बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गरेनन् भन्ने खालको कुरा एकीकृत माओवादीकै नेताहरुका भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ । सो पार्टीका सचिव सीपी गजुरेलले मधेशवादी दलका कारण माओवादीले बहुमत जुटाउनबाट चुक्नुमा भारतकै हात रहेको बताएका छन् । यसको मतलब लैनचौर पुगेका माओवादी नेताको रिक्वेस्ट दारीवाला सुदले मानेनछन् भन्न सकिएला कि नसकिएला ?
त्यसो त कुनैबेला भारतीय सीमानामा गएर तहल्का मच्चाएको माओवादीका नेताहरु अहिले पनि भारतीय जनतासँग वैरभाव नभएको तर नीतिको विरोध रहेको रेडिमेड जवाफ बताउन छाड्दैनन् । सोही गोप्य बैठक भएको भनिएको समयलगत्तै माओवादीका एक नेताले संसद भवनअगाडि नै सो जवाफ दिए । यदि भारतले नै यो तरिका अपनाएको हो भने त मधेशी मोर्चा पुरै असफल ।
कम्तीमा मन्त्री पदका लागि मात्र त होइन नि, अहिलेको बुहमतको प्रयास । संविधान र शान्ति, लोकतान्त्रिक अभ्यासका कुरा पनि छन् नि । भारतीय संसदमा जस्तो भाँडभैलो भइहाल्ने त होइन नि नेपाली संसदमा, केही न केही भएपनि नेपालीहरु समझदार छन् भन्नेमा खै दारीवाल सुदजीले बुझेको ? क्षमता विकास गर्नुपर्‍यो नि । -महेन्द्र ।
संसदमा सबै छिर्न सहज भएको भए नेताले चड्कन खाने सम्भावना
अस्तित्व रहेसम्म सम्भावना जे पनि हुनसक्छ । उदाहरणको लागि प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बन्न संसदमा बहुमत नल्याउने पक्का जस्तै भएपनि यदि दुवै पक्षका उम्मेदवारले आफ्नो दलको ह्वीप नमानेर आफुखुशी गरेका भए जे पनि हुनसक्थ्यो । अर्थात् जस्को पक्षमा पनि बहुमत आउने सम्भावना हुनसक्थ्यो । तर त्यसो हुने कुरै भएन, त्यही भएर दुइदुइ पटक हारे ।
सम्भावना यसो पनि हुनसक्थ्यो, यदि संसद भवन नयाँ बानेश्वर सम्मेलन केन्द्रमा देशको अलि चिन्ता गर्ने नागरिक छिरेको भए, संसद भवन गेटमै भोट नहाल्ने नेताहरुलाई चड्कन पनि दिन सक्थ्यो । विभिन्न कारणले संसदमा छिर्न पहुँच भएका केही सर्वसाधारणको आक्रोशले त्यही बताइरहेको थियो । बोल्ने कुरा केही नै नभएपनि टिभीमा अनुहार देखाउन खोज्ने नेताहरु भने त्यो कुरा बुझेकै थिएनन् ।
संसद परिसरमा काम विशेषले आएका खासगरी त्यहीं जागिर भएकाहरु नेताहरुका मतभेदपूर्ण कुरा सुन्नुभन्दा जगजीत सिंहका गजल सुन्न रुचाउँछन् । त्यति मात्र होइन, उस्तै परे नेताहरुलाई गाली गर्न पछि पर्दैनन् । बिचरा नेताहरु बाहिर सडकमा देखिने भए रिसाएका नागरिकले तारो बनाउने थिएनन् भन्न सकिन्न । के गर्ने केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको चुनाउ भएपनि निर्वाचित हुने कोही होइन । बरु धेरै सभासद भागाभाग गर्ने गरेका छन् । दोस्रो चरणको चुनाउको विवरणले नै देखाउँछ कि माओवादीका प्रचण्डको लागि चुनाव हुँ २१८ सभासदले भोटै हालेनन् भने रामचन्द्र पौडेलको बेलामा २१४ ले तटस्थता देखाए । यो संख्या सानो होइन नि । कम्ती रकम खर्च भएको छ र, यी सभासदको खर्च जुटाउन ।
जति जे भनेपनि यिनै मत नहाल्ने सभासदहरुका कारण, अर्थात सत्ता समीकरणका लागि भन्दै उम्मेदवार उठाएका दलका नेतालाई हलेदो खुवाउन अर्थात बेस्सरी थकाउन भोट नहालेपनि यो संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । आफु भोटका कारण जितेर आएका सभासदले कुनै कार्यकारी निर्वाचित गर्दा पनि त सम्झनुपथ्र्यो, जस्लाई हालेपनि भोट त हाल्नुपर्छ । सुरुका दिनमा कम्ती रहेको तटस्थताको संख्या पछिल्लो समयमा झन् बढेको छ ।
तर एक विना विभागीय मन्त्री, कामचलाउ, बिचरा उनको विभाग नै नभएकोले होला बडो निराश पारामा मधेशी दलले आगामी चुनाउमा भाग लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरे । त्यसो भनेपनि आक्रोश झनै बढ्ने पो हो कि ? किनभने प्रतिबद्धता र धेरै चिल्ला कुरा कस्ले पत्याइराख्ने ? - महेन्द्र । तस्वीरमा, पत्रकारले सभासदहरुसँग प्रतिक्रिया लिने क्रममा व्यस्त भइरहने संसद भवन ।
बकुलाजस्तो ढुक्न पल्केका दलका नेताहरुको पौरख
नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्न कसरी के भए
प्रधानमन्त्रीको संख्या असीमित हुने शंका
स्वभाविक शंका गर्न लाज मान्नु पर्ने कारण नहुनुपर्छ, त्यही भएर नै हुनुपर्छ कि धेरैले आशंका गर्न थालेका छन्, देशमा अब प्रधानमन्त्रीको संख्या एक होइन धेरै हुनसक्छ । कुनैबेला उपप्रधानमन्त्रीको पद सकेसम्म नराख्नु नै वेश, भएन भने दुइटा त असम्भव नै जस्तो, अर्थात धेरै कम मानिसले सोचेको प्रणाली हो ।
जे सोचाइ हुन्न, त्यही भएर छाड्छ । यही भएको छ, सहमतिका नाममा दलहरुले दुइओटा सम्म उपप्रधानमन्त्री बनाए । सहमति भनेपनि जे भनेपनि आखिर भएको भनेको भागबण्डाकै लागि हो । अहिले पनि त्यही भएको छ । नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी नगर्ने पार्टी भेट्नु प्रजापरिषद पार्टीलाई खोज्नुजस्तै भएको छ ।
किनभने एकीकृत माओवादीले आफ्नो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेपछि नेपाली काँग्रेसले पनि संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा चर्चामा रहेका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र अर्का दावेदार एवं कांग्रेस महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङको समर्थनमा काँग्रेसले पौडेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने बताएको छ ।
धन्य, विवाद समाधान गर्न त सकेछन् । काँग्रेसमा यो भन्दा ठुलो चाड के होला । के गर्ने सरकार बनेर देश सही बाटोमा जानुपर्नेमा एउटा पार्टीको विवाद मात्रै टुंगिन्छ । पछिल्लोपटक एकीकृत माओवादीले नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि पार्टी भित्र र बाहिरको विकल्प खुल्ला गर्ने निर्णय गरेर अनपेक्षित समीकरणको सम्भावना देखाएको छ । त्यो कहिलेसम्म टिक्ने हो, हेर्ने बाँकी छ ।
साना दलहरुको चुरीफुरी समीकरणका लागि मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको पदमा समेत देखापर्न थालेका छ । प्रमुख तीन दल सहमतिको सरकार गठन गर्न असफल भए आफूहरुले सहमतिको सरकार विकल्प दिन सक्ने दाबी साना दलहरुले गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीको दाबेदार कस्ले गर्ने भन्दा पनि कस्ले नगर्ने भन्ने समुहको खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म देखिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो, सरकारमा जानका लागि त्यति इच्छुक नदेखिएको । सो पार्टीले आफुलाई सरकारमा जान मन नलागेको बताएमा राजनीतिको रङै अर्को हुन्थ्यो कि । - महेन्द्र । तस्वीरमा, नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छे ।
नारामा संगठित भनेपनि व्यवहार उस्तै
जब नयाँ सरकार गठनको चहलपहल सुरु हुन्छ, तब सुरु हुन्छ चहलपहल दलहरुमा । वास्तवमा चुनावको घोषित नीति कार्यान्वयन गर्ने विषय, राष्ट्रियताका सवालमा, गलत नीतिका विरुद्धमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने दलहरु केवल चुनाव जित्ने र हार्नेमा अनि सरकार गठनको बेलामा मात्रै निकै सक्रिय भएजस्तो गर्छन् । व्यवहारमा के गर्ने भन्नेमा होइन ।
वास्तवमा, चहलपहल हुनुपर्ने विषयमा चुप लागेर दलहरु अर्थात तिनका नेताहरु बडो सक्रिय हुनुमा पनि केही राज होला कि । किन नहुनु, अवश्य पनि छ । त्यो भनेको केवल दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हो । त्यसो त जीवनभर राजनीति गरेपनि बाहिर भनिनेजस्तो परिवर्तन गर्न सकिन्न भन्ने लाग्ने रहेछ कि दलहरुमा । त्यही निराशा पोख्न केवल आफन्तका अनि आफ्नै स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् ।
कसैलाई नतोकी भन्नुपर्दा पनि खासगरी ठुला तीन दल नै सत्ताको नेतृत्व गर्नका लागि विभाजित अवस्थामा छन् । संकट टार्नका लागि, अथवा अग्रगमनका लागि भनेर दलहरु सहमति गर्छन् एउटा तर व्यवहारमा देखाउँछन् अर्को कुरा । यही त भएको छ नि । भित्री सोचाइको कुरा गर्ने हो भने त नेतृत्व गर्ने एउटैले हो भन्ने होला । सहमति गरे भइहाल्थ्यो । पक्कै पनि देशमा तीनजना प्रधानमन्त्री त हुन्नन् होला ।
यसैका नाममा लडामती भएको छ । यो त भयो ठुलाठालुहरुको अवस्था । तर सानाको पनि कम छैन । अहिल्यै फुट्न थालिसके । ठुला दलमा ठुलै पदको विवाद छ भने साना दलमा मन्त्रालयदेखि लिएर अन्य विभाग, संस्थान, भएजतिका सबै सरकारी कार्यालय जहाँ राजनीतिक नियुक्ति पनि हुन्छन् । त्यसैका लागि साना दलहरु फुट्न थालिसके । पछिल्लो शिकार बनेको छ, जनमोर्चा ।
दुइपटक फुटेर गड्याम्मै सो पार्टीलाई पनि कोही ठुलो दलले लोभ देखाएको हुनुपर्छ कि अब केही न केही पाइन्छ भनेर । कताकताबाट फुट्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा भएको चित्रबहादुर केसीको सो पार्टी यो हालतमा आयो । माओवादीमा प्रवेश गर्ने भनिएका डिलाराम आचार्य छुट्टएिका छन् । सरकारै बन्न पाएको छैन, यसरी फुट्ने । अब कति फुट्ने हुन् । एक दुई बाम पक्कै फुट्ने होलान्, मधेशवादी पनि छन् । त्योबाहेक ठुला दल पनि पदको भागबण्डा नमिल्दा फुट्न के बेर । भन्न त भन्छन्, दलहरु हामी कम्युनिष्ट यति संख्यामा, उति संख्यामा । अझ कहिलेकांही कम्युनिष्टको संख्या यति भनेर प्रतिशत निकाल्न पनि बेर लाउन्नन् । तर व्यवहारमा भने यस्तो छ । -महेन्द्र ।
गाली गरेपनि सत्ताकै प्यार
बोल्ने स्वतन्त्रता त नेपालको लोकतान्त्रिक भनिएका प्रायजसो संविधानमा रहेकै छन् । त्यही भएर नेपालमा जति सडक आन्दोलन अनि विरोध प्रदर्शन काठमाण्डौं लगायतका शहरमा भन्दा कमै हुन्छन् होला अरु सडकमा । वास्तवमा चित्त नबुझेको कुरा फ्याट्ट बोल्न पाउनु र बोल्नु राम्रो कुरा पनि हो । तर त्यसले अराजकताको स्वरुप ल्याउँछ र पो चिन्तामा पार्छ ।
यही अधिकारको भरपुर उपयोग गरेका छन् दलहरुले । दलहरु, तीन ठुला माओवादी, काँग्रेस र एमालेले त सत्ताको बागडोर सम्हालेर त्यसको भरपुर उपयोग गरेकै छन्, सरकारमा रहेर वा संविधानसभामा आफ्ना सभासद पठाएर आफ्नै वर्चश्व कायम गरेर । त्यही भएर उनीहरुको नाम पनि भ्रष्ट्राचार, अनियमिततामा पनि आउने गरेको छ । अझ पछिल्लो समयमा त अपराधको चर्चा पनि पार्टीका नेताहरुकै नाममा हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि हालै एकीकृत माओवादीका नेता कालीबहादुर खामको लुट प्रकरणमा आएको नाम होस् वा व्यक्तिगत रुपमा तर खुल्न नसकेका अन्य घटनामा काँग्रेस एमालेकै नेताहरुकै नाममा किन नहोस् । उदाहरणका रुपमा संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालकी पत्नीले सरकारको सहयोग लिएर 'सामाजिक' काम खुबै गरेकी छन् रे । पद न सद त्यसै काम ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु पनि के कम । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २२ दलले प्रमुख तीन दल विरुद्ध खेद प्रस्ताव नै पारित गरेर चकित पार्ने प्रयास गरेका छन् । दलीय स्वार्थका कारण ठूला दलले मुलुकलाई बन्धक बनाएको उनीहरुको आरोप त गज्जबकै छ नि । किनभने तीन दलहरुकै दादागिरि छ नि यो मुलुकमा ।
तर दुःखको कुरा के छ भने ताक परे तिवारी नत्र गोतामे । अब सरकार बनाउन समीकरणको कुरा आओस् त साना दल जति निर्णायक अरु कुनै दल बन्दैनन् । किनभने उनीहरु पनि जतिसुकै ठुला कुरा गरेपनि सत्ताका निकै प्यारा छन् । सुनिएअनुसार एकीकृत माओवादीले काँग्रेस एमालेलाई पाखा लगाउने मनसुबाले साना दलहरुका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सोचेको छ । त्यसो हो भने फेरि उनै सूर्यबहादुर थापा पो आउने हुन् कि । -महेन्द्र । तस्वीरमा, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा तथा संसद बैठक बस्ने भनिएको तर सबैजसो राजनीतिक बैठकस्थल बनेको बानेश्वरस्थित भवन ।
उखान चरितार्थ गर्दै दलहरु
पुराना उखान प्रयोग गरेर आधुनिक समय सुहाउँदो नहुने गरेको भाषाविज्ञहरुबाट बेलाबेलामा सुझाव आउने गरेको छ । हो, भाषाविज्ञहरुले राम्रो भाषाको प्रयोग गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएपनि, साथै धेरै हदसम्म त्यसको प्रयोग हुने प्रयास हुने गरेपनि सबैभन्दा सचेत भनिएको राजनीतिक वृत्तमा भने यो फुस्रो सावित भएको छ । किनभने दलहरुले भाका राखेको समयमा गर्न सकेका काम निकै कम छन् । संकटै टार्नका लागि भएपनि मध्यरातमा सहमति गर्न सक्छन्, गरेका पनि छन् दलहरुले तर त्यो अवस्था रहेन अहिले, किनभने यो बेला भनेको खसीको मोलतोल जति गर्‍यो, त्यति नै फाइदा हुने समय हो । उनीहरु संविधान यसै बनाइहालिन्छ नि भन्ने अति महत्वाकांक्षाले घर बनाएको छ । जुन घर खतरनाक छ ।
यसैको कडीका रुपमा लिनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक दिएको समयसीमा गुज्रनै लाग्दा प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुबीच भएको छलफल पनि टुंगोमा पुग्न सकेन । भन्न त भनिन्छ, सेना समायोजनका खाकाका विषयमा मुख्य विवाद छ भनेर, खाका ल्याएपनि सुख छैन नल्याए पनि सुख छैन, माओवादीका माग पुरा गरिदिए पनि सुख छैन, पुरा नभए पनि सुख हुने कुरै भएन, केही गरि नहुने ।
आखिर किन यस्तो हुन्छ, प्रष्टै छ, सरकारमा प्रधानमन्त्री कुन दलको को हुने ? काँग्रेस-एमाले नेताहरुले माओवादीले सहमतिका लागि भन्दै अघि सारेको प्रस्ताव शान्ति सम्झौता र यसअघिका सहमति भन्दा बाहिर भएको भन्दै आपत्ति जनाउने गरेका छन् भने एकीकृत माओवादीले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।
यसअघि, गत असार १६ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले एक साताभित्र सहमतिको सरकार बनाउन दिएको समय पुगेन भन्दै संविधानसभामा रहेका २४ सै दलले राष्ट्रपतिसँग थप पाँच दिनको समय मागेका थिए । सहमतिको सरकार बनाउनका लागि दलहरुले मागेको १२ दिनको समय एकार्काको नाडी छाम्दैमा बितेकोले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
त्यही भएर शान्ति प्रक्रिया, संविधान, सेना समायोजन, सरकार भागबण्डा, सहिष्णुता, एकीकृत प्रयासका लागि सधैं लडामती दलहरुलाई बाह्र वर्ष डुंग्रामा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङगा को बाङगै भने कसो होला । कुकुरसित तुलना गर्‍यो भन्लान्, तर के गर्ने उखान र परिस्थिति उस्तैउस्तै छ । -महेन्द्र । तस्वीरमा, तीन दलका शीर्ष नेताहरु ।
हिरो बन्ने धुनमा जिरो
समय मागेपछि बेइमानी भयो
सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पाँच दिन समय थप गरेपनि दलहरु भने सहमतिको सरकार भन्दा पनि आ
स्रोतहरुका अनुसार छलफलमा तीनवटै दलले आ
समय मागेको अर्को दिन एकीकृत माओवादीले सत्तारुढ तीन मधेसवादी दलसँग छलफल गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाउन आग्रह गरेको छ । मधेशवादी दलले भने शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको लडाकु समायोजन, कब्जा घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता विषयलाई माओवादीले कार्यान्वयन गर्न माओवादीको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । उनीहरुले जे भनेपनि कतातिर राम्रो मन्त्रलाय पाइन्छ, उनीहरुको नियतिबाटै थाहा हुन्छ, धेरै पर्खनै परेन ।
यस्तै, एमाले र तीन वटा मधेशवादी दलले माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने स्पष्ट पारेर बहुमतका लागि एमालेसँग मुख जोड्न तयार रहेको संकेत गरेका छन् । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष खनालले मधेशवादी दलसँग राष्ट्रिय सरकार गठनको विषयमा छलफल भएको बताउँदै अरु विषयमा सहमति बने मधेशवादी दल एमालेको नेतृत्व स्वीकार्न तयार रहेको दाबी गरेर आफु पनि प्रधानमन्त्रीको भावी उम्मेदवार भएको संकेत गरे ।
सिंहदरबारका बैठक कक्ष मात्र होइन, अन्तरक्रिया गरिने सबै कक्ष पनि सरकार गठनका लागि तर्कमय बन्ने गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो काँग्रेसको भएको भन्दै त्यसका लागि एमालेले इमान्दारीका साथ सहयोग गर्नुपर्ने बताए । यसको मतलब एमालेसँग काँग्रेसको सरकार बनाउन एकता कायम गर्ने बाटो केही अवरुद्ध भएछ क्यारे । श्रेष्ठ एक कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।
अब भन्नुपर्ने के भएको छ भने बानी कहिले सुधार्ने हुन् कुन्नि दलहरुले, वाचा गर्ने एउटा अनि गर्ने अर्को । भन्न त भन्लान्, बहुपक्षीय छलफल पनि सहमतिका लागि हो । तर त्यसो मान्न सकिन्न, नेतृत्व गर्न खोज्नेजति चारतिर फर्केपछि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ र । -महेन्द्र ।
ˆनो पक्षमा बहुमत जुटाउन सक्रिय बनेका छन् । बेइमानी भएपछि कस्को के लाग्दो रहेछ र । यसै क्रममा तीन ठूला दल एकीकृत माओवादी, काँग्रेस र एमालेले सरकार गठनको समीकरणमा निणर्ायक मानिने मधेशवादी दलहरुसँग छलफल तीब्र बनाएका छन् ।ˆनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोगका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । आफुबीच सहमति गरेर अगाडि जानुपर्नेमा दलहरु यसरी बहुमतमा जान खोज्नु बेइमान शिवाय के हुनसक्ला र । औपचारिकताका लागि देखाउन मात्रै भएपनि समय ढल्किंदै जाँदा तीन दल बैठक बसेजस्तो गर्ने पनि होलान्, तर त्यो सबै देखावटी शिवाय के नै होला र ।
अरुले मानुन् कि नमानुन् प्रधानमन्त्रीको आशा
लिगलिगे दौड भन्दा पनि बिग्रेको हालतमा पुगेको छ अहिले प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्वको विषय । वास्तवमा यस्तो हालतमा पुगेको यो प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने इच्छा भएका अधिकांशलाई इच्छा पनि हटिसकेको हुनुपर्छ । होस्, किन हुनु यस्तो विवाद र कचिंगलका बीच प्रधानमन्त्री । कतै उपाय नलागेर राजनीतिमा छाएकाहरुले जति मरिहत्ते गरेपनि युवाहरुले भने त्यसो गर्न तयार भएका छैनन् ।
सधै मिच्याइँ हुने देशमा युवाहरु चुप लागेरै वेश गरेका छन् । बोलुन् भने वरिष्ठ भनिएका बुढा नेताहरुको बाहेक कुरा सुनाउन र सुन्न अभिप्रेरित गर्नेको संख्या पनि कम छ । ठुला भनिएहरुकै डरका कारण वा परिस्थितिले गर्दा पनि युवाहरु अगाडि आउन सकेका छैनन् । कुनै दिन पासा पल्टेला, त्यो आशा गर्ने समय भने छ । तर यही भन्दैमा वृद्ध नेताहरुका पट्यारलाग्दा कुरा सुन्नु पनि कति । सुन्दा सुन्दा कानै फुट्नै थालिसके ।
आफ्ना समर्थकहरुका अगाडि पछाडि र केही पत्रकारलाई डाकेर गोप्य कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा सुनाउने नेताहरुले पछिल्लो समयमा भने खुलेरै घोषणा गर्न थालेका छन् । तीमध्ये एक नेता हुन काँग्रेसका सो पार्टीका महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्रीका लागि आफू कांग्रेसको बलियो दावेदार भएको खुलासा गरेका छन् । खुलासा, उनका समर्थकका लागि होला, तर अब अलि चेतना भएकाहरुलाई भने यो पुरानो कुरा भइसक्यो ।
बिचरा काँग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा फुटबलका लागि खेलिने बाजीको जस्तै हालत छ । त्यही भएर त उनीहरुले अर्थात सत्ताको दाबेदार गर्ने दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनको समयसीमा बढाउन आग्रह गरेका छन् । अझ गुरुङले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आए आफू नै प्रधानमन्त्री हुने ठोकुवा गरे । उनकै पार्टीमा हानथाप छ, कुटाकुट र मारामारको स्थिति छ, कसरी पत्याउने र खै ।
बरु दोष दिन्छन् आम सञ्चारमाध्यमलाई । संचार माध्यमले शेरबहादुर देउवा र आफूबीच समिकरणको हल्ला चलाएर फाटो ल्याउन खोजेको उनको गुनासो छ । गुनासो पनि पत्याइनसक्नुको । भएको विवादलाई लेखेर पढ्न आकषिर्त गर्नु तथा सुन्न हेर्न लायक बनाउनु समाचार माध्यमको कामै हो नि । त्यत्तिकै गाली गरेर हुन्छ र । अभिभावक बनेर बस्ने बेलामा पदलोलुपता देखाउने अनि अरुलाई दोष देखाएर जात्रा नगर्नु नै वेश हुन्थ्यो कि । - महेन्द्र ।
July 03, 2010 6:27 am
भारतीय माओवादीको पक्षमा प्रचण्ड
एकीकृत माओवादीले नलुकाएको कुरा के हो भने उनीहरुको लडाइँ भारतीय संस्थापन विरुद्ध नै हो । यो कुरा उनीहरुले कहिले केही हच्किएर त कहिले आम सञ्चारमाध्यममा खुला रुपमा भन्दै आएका छन् । अझ उनीहरुको भनाई सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा जाने विषयलाई लिएर हुने गरेको छ । जुन अहिलेको समयमा नौलो त होइन, तर अर्कै तरिकाले समयसापेक्ष भएको छ ।
त्यो हो, भारतीय माओवादीलाई एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखाएको सहानुभुतिबाट । प्रचण्ले भारत सरकारले भारतीय माओवादी विरुद्ध थालेको कारवाहीको बिरोध नै गरेका छन् । प्रचण्ड पहिलो पटक खुल्ला रुपमा भारतीय माओवादीको पक्षमा बोलेका छन् । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कहिलेकांही आएका यी भनाईले भारतमै सनसनी छाउने किसिमले आएका छन् ।
यसअघि भारतीय सरकारले सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सीमामा कडा पारेको निहुँ भारतीय माओवादीलाई नेपाली माओवादीको सहयोग भनेर भनेको थियो । तर अब भने त्यसले औपचारिकता नै पाएको छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाईबाट । भारतले अब यही निहुँमा सुरक्षा कडा बनाउने नाममा भारतस्थित नेपाली कामदारलाई पो दुःख दिने हो की, वा अन्य झन्झटिला कदम पो उठाउने हो कि आशंका गर्न थालिएको छ ।
भारतीय माओवादीविरुद्ध भारत सरकारले जारी राखेको सुरक्षा कार्वाहीको विरोध गरेको भन्ने एक भारतीय समाचारपत्रमा आएको छ । यदि सो आशयको भनाई बंग्याइएको हो भने प्रचण्डले सच्याउन केही दिन त पर्खन पर्ला नै तर यसो भनिएको हो भने भारत र एकीकृत माओवादीको शीतयुद्ध झन् चर्किने पक्का जस्तै छ भन्न सकिन्छ । किनभने माओवादीविरुद्ध भारतले पछिल्लो कडा रणनीति अपनाउँदै आएको छ । यो राष्ट्रसंघसम्म पनि पुगिसकेके छ ।
बरु प्रचण्डले गरेको एउटा कुरा भने अनुकरणीय छ नेपालमा । उनले समस्याको समाधान बलबाट नभई वार्ता र सम्झौताबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जुन नेपालमा भएको थियो । यसलाई भारतले अनुसरण गरे राम्रो । कम्तीमा पनि नेपालमा जनविद्रोह र अर्को जनयुद्धको धम्की दिने एकीकृत माओवादी नेताहरुमा अरुलाई अर्ती दिने क्रममा भने कम्तीमा वार्ताको कुरा गर्छन् । अब यस्तो खालको प्रतिबद्धता स्वदेशका घटनाक्रममा पनि गर्नु जरुरी छ ।
भारतीय माओवादी र नेपाली माओवादीमा समानता भएको समेत प्रचण्डले भनेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय चर्चामा रहेको माओवादी विद्रोहलाई लिएर आएको प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्ध वा खासगरी एकीकृत माओवादीसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने हो, त्यो भने पर्खनैपर्ला । -महेन्द्र ।
सरकार खाने तयारीमा बैठकै बैठक
त्यसो त बैठक बस्नका लागि, गफ गर्नका लागि नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई कस्ले पो जित्ला र । कसैले जित्दैन । दलहरु अति नै वार्तामा बसेपनि निष्कर्ष भने कमै निकाल्छन् । अझ सरकार परिवर्तन गर्ने बेलामा त यति वार्तामा बस्छन् कि कसैले सक्दैन उनीहरुलाई । यो अवधिमा के साना के ठुला संविधानसभाका सबै दल वार्तामा ।
यही क्रममा साना १७ दलले ठूला तीन दलको सरकार राष्ट्रिय सरकार हुन नसक्ने भन्दै २५ वटै दल सम्मिलित राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन हुनुपर्छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले एक्कासी राजीनामा दिएपछि उत्साहित भएको एकीकृत माओवादीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने उदघोषै गरेको छ । नयाँ त होइन यो घोषणा, तर आफ्नै पार्टीमा अनिश्चयमा परेको उसले पाएमा कति समय लगाउने हो प्रचण्डलाई नै थाहा होला ।
खासगरी माओवादीमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारमा अध्यक्ष प्रचण्ड वा उपाध्यक्ष भट्टराई मध्ये कसलाई प्रस्तावित गर्ने भन्ने बारेमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । दाबी भने निकै गर्छन् नेताहरु, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेतृत्वको विषयमा कुनै विवाद नभएको भन्छन् । माओवादीले प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य भएको वार्ताटोली गठन गरेको छ, सरकारबारे दलहरुसँग छलफलका लागि । जो नेताले प्रधानमन्त्री चड्काउने दाउ खेलिरहेका छन्, उनीहरुले नै वार्तामा बस्ने भएपछि आफैं हानाहान गर्ने हुन् कि भन्ने डर ।
सत्ता समीकरणको रन्कोले माओवादी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछी नयाँ सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्न बस्ने भनिएको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ । पार्टी कार्यबहाक सभापति शुशिल कोइराला अमेरीकाबाट फर्किएपछी मात्र बैठक बस्ने बताइएको छ, यो बाहेक प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि एमालेले पनि सहमति कार्यान्वयनपछि मात्रै सरकार बन्न सक्ने भन्दै फेरि नेतृत्व गर्ने तरिकाले च्याँखे थाप्न खोजेको छ ।
यो बाहेक शीर्ष तीन दल पनि बैठकमा बस्न सकेनन्, नेताहरुको व्यस्तताका कारण । बैठकमा बस्दाबस्दै फुर्सद नहुने अवस्थामा पनि दलहरुले किन यसरी बैठकको आयोजना गरेका हुन् त्यो भगवानले पनि जानेका छैनन् होला । सहमति गर्ने भए शालीन तरिकाले सहमतिउन्मुख वार्ता गरे त भइहाल्थ्यो नि, किन यो अन्तहिन वार्तामा समावेश हुने खोजिएको होला कुन्नि । -महेन्द्र । तस्वीरमा, एमाले बैठक ।
यसरी बित्यो माधव नेपालको काल
पुराना नेताको परिचय पाउँदै जानु अनि माधव कुमार नेपाल संविधानसभा चुनावमा पराजित हुनु नै अनपेक्षित थियो । अपेक्षा विजयको भएपनि त्यो भएन । तर घटनाक्रम यसरी बदलियो की संविधानसभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवारहरुबाट नमिठो पराजय ब्यहोरेका माधवकुमार नेपाल माओवादीकै सहयोगमा मनोनीत सभासद् हुंदै निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भुमिका खेेलेका नेपाललाई संविधानसभा निर्वाचनताका र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भरि माओवादीले असहयोग मात्र गरेन अनेकौ लाल्चछना लगाइरह्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षको चर्को असहयोगकाबीच प्रधानमन्त्री नेपालले केहि सकारात्मक प्रयासको थालनी गरेपनि ती सफल हुन सकेनन् । समन्वयकारी नेता भनेर चिनिने नेपालले माओवादीसाग संवाद जारी राख्न सफल भएपनि समन्वयकारीको परिचय भने क्रमश गुम्दै गयो । गठबन्धन भित्र बाँकी दलले प्रधानमन्त्री नेपाललाई पुरै सहयोग र विश्वास गरेपनि एमाले भित्रै एउटा पक्षको असहयोग खेपिरहनु पर्‍यो । त्यो असहयोग राजिनामा दिनुअघिका केही दिनसम्म पनि प्रष्टै देख्न सकिन्थ्यो ।
आम हड्ताल सम्मको माओवादी आन्दोलनको सामना, अयोग्य लडाकुको विदाई र लडाकु समायोजनको खाका तयार पार्नु उपलब्धी रहे भने दण्डहिनताको प्रश्रय, बेलगाम बोली र आफन्तलाई अवसर कमजोरी रहे । बेलगाम उनको बोली मात्रै होइन, उनको मातहतमा रहेका मन्त्री पनि निकै आलोचनाको पात्र बने ।
माओवादी अवरोधकाबीच अघिल्लो बजेट पारित गराउन सफल भए पनि यस पटकको बजेट ल्याउने टुंगो नै नभई प्रधानमन्त्री नेपालले राजीनामा दिनु परेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै नेपालले माओवादी असहयोगलाई असफलताको कारकका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पद नै त्याग गर्नुपरेपछि यति त भन्नैपर्‍यो, त्यही माओवादीका कारणले ।
माधव नेपाललाई कठपुतली भनेर नथाक्ने माओवादी नेताहरुले प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामा पछि क्षणिक रुपमा संन्तोषको सास फेर्न सक्छन् । तर अब अरुलाई कठपुतली प्रधानमन्त्री बन्न नदिन आफै कसरी नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने महाभारत शुरु हुनेछ । महाभारत मात्रै होइन दुइटा तीनओटा महाभारत नदेखिएला भन्न के बेर ।
धम्की र बखेडाको भरमा अन्ततः माधव नेपालले राजीनामा गरे पनि तत्कालै नयाँ सरकार बन्ने लक्षण देखिएको छैन् । नेपाली राजनीतिको बिडम्बना नै भन्नुपर्छ-मुल विषयमा नेताहरुको पटक्कै ध्यान गएको छैन । अब सहमतिमा सरकार बनाउने, शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने र थपिएको एक वर्षे अवधी भित्र संविधान जारी गरेर मुलुकलाई निकास दिन के गरिने हो त्यो भने पर्खनैपर्ला कि । -महेन्द्र ।
आन्तरिक कलहमा परेको जम्बो पार्टी
कमैले ठान्दा हुन् एकीकृत माओवादीमा प्रचण्डले भनेपछि जे पनि हुन्छ भनेर । कुनैबेला आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेतालाई कारबाही गरेको इतिहास प्रचण्डसँग भएर पनि हुनुपर्छ, त्यस्तो भन्ने गरिएको । तर धेरैलाई पत्याउनै गाह्रो पर्न सक्छ, प्रचण्डलाई अन्य शीर्ष नेताहरुले एक्लाए भन्दा । आमसञ्चार माध्यममा मात्रै आएक कुरालाई पत्याई नहाल्ने बरु गाली नै गरिहाल्ने प्रचण्डले यसपालि भने आफैं मुख खोलेका छन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास शुरु भएको खुलासा गुनासो गरेका छन् । जब आलोचना हुन्छ, महाधिवेशनको सट्टा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला डाक्न अघि सरिहाल्ने उनले नेताहरुलाई ठेगान लगाउनुको सट्टा गुनासो पो गर्न थाले । देशी विदेशी शक्तिले त घेराबन्दीमा पार्न खोजेकै थिए यसमा आप
१० वर्षे लामो युद्ध गरेर आएका प्रचण्डले पार्टीभित्र आलोचना हुन थालेपछि लडाईंमा जानुको विकल्प छैन थाले, पटक पटक लडाईंका पक्षमा बोल्दै प्रचण्डले भनेका छन् कि अबको लडाईं निकै लामो र निर्मम हुन्छ रे । आफ्ना पार्टीका नेतासँग रिस उठेको भन्दैमा यसरी आलोचना गर्न पाइन्छ र भनेको, सबैलाई मुछेर । नेताहरुको रणनीति पो हो कि यो ।
प्रचण्डमा प्रधानमन्त्री बन्ने धुन निकै बढेकोले अन्य नेताहरु चिढिएको भन्ने कुरा पनि त ठिकै हो नि । उनको पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले बरु प्रधानमन्त्रीका लागि अन्य दलहरुले प्रस्ताव गरेपनि नबन्ने बताएर पदलोलुपता त देखाएका छैनन् । तर प्रचण्ड भने आफ्ना पार्टीका केही नेताले बाहेक अरुले भन्नु त कहाँ हो कहाँ आफै प्रधानमन्त्री बन्न तम्सिएर पदका भोका देखिन खोजेका छन् । यसले उनको आलोचना हुन अस्वभाविक होइन कि । -महेन्द्र ।
\_mनै पार्टीका नेताहरुपनि संलग्न भएकोमा दुःख लागेको प्रचण्डको भनाइ छ । आफ्नै पार्टीको कार्यक्रममा उनको यो खुलासा आएको हो । \_mना विरुद्ध हुने षडयन्त्रको अन्तिमसम्म पनि प्रतिकार गर्ने बताएर प्रचण्डले भारतविरुद्ध प्रयोग गर्दै आएको शब्दावली अब भने आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध यस्तो भन्नुपर्ने अवस्थामा आएका छन् । वास्तवमा कुनैबेला निकै शक्तिशाली भन्नुपर्ने अवस्थामा रहेका नेता प्रचण्डले एकलौटी ढंगले पार्टी संचालन गरेको विरोधमा पार्टीका दोस्रो पंक्तिका नेताहरु मोहन वैध, बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापाबीच मोर्चाबन्दी भएको खबर सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । (more)
रिसको झोंकमा फर्काइएका सभासद
अभिभावकले सिकाउने साझा खालको बानी व्यहोरामध्ये रिसाउनुहुन्न है बाबु भन्ने पनि हो । तर एकीकृत माओवादीको नेतृत्वलाई भने फकाउने पनि कोही भएन, सिकाउने पनि कोही भएनजस्तो छ । आफैं सिकेको भए त राम्रै हुन्थ्यो, त्यो पनि भएन । त्यसो भए के भयो त, भयो, केही न केही भयो, त्यसको शिकार बने एकीकृत माओवादीका नेताहरु ।
अमेरिकामा आयोजित शान्ति र संघीयतासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका माओवादी नेताहरु स्वदेश फर्किएका छन् । कार्यक्रम सकेर फर्किएका होइनन् उनीहरु । उनीहरु बीचबाटोबाटै फर्किएका छन् । त्यसो त उनीहरु अमेरिका सधैं बस्ने योजनाका साथ गएका पनि होइनन् । केही दिनको लागि एक कार्यक्रममा भाग लिन गएका हुन् । तर पनि उनीहरु र्फकन बाध्य भए ।
बाध्य भए त केवल पोलिटब्यूरो बैठकको निर्देशनपछि । पोलिटब्यूरो सदस्य अग्नी सापकोटालाई अमेरिकी अध्यागमन भिसा नदिएपछि यस्तो दुःख व्यहोर्नुपर्ने रहेछ । त्यसो त नेपाली सिनेमाका चर्चित अभिनेता राजेश हमाल, माओवादीकै अर्का नेता सुरेश आलेमगरलाई पनि अमेरिकी अध्यागमनले भिसा दिएको थिएन, जुन चर्चित भएको थियो । विश्वकप फुटबलमा जुनसुकै टोलीलाई पनि स्तब्ध पार्न सक्ने क्षमता भएको भनिएको अमेरिकाले अहिले एकीकृत माओवादीका नेताहरुलाई पनि स्तब्ध पारेको छ ।
तर अमेरिकाले पि्रक्वार्टरफाइनलमा घानालाई भने स्तब्ध पार्न सकेन । नेपालस्थित अध्यागमनको निर्णयबाट भने माओवादी सचिव सिपी गजुरेल पोलिटब्युरो सदस्यहरु टोपहादुर रायमाझी र पम्फा भुसाल स्वदेश फर्किन बाध्य भएका छन् अर्थात शिकार भएका छन् । केही गैरसरकारी संस्थाहरु, जुन मानवअधिकारप्रति सहानुभुति राख्छन्, उनीहरुको भनाई भने खेर गएनछ क्यार, यसपालि ।
फर्काइएका ती नेताहरुले अनुशासन लाई ध्यानमा राखेर केही नबोलेपनि चसक्क भने भएकै हुनुपर्छ । मानवअधिकारको विषयलाई लिएर सापकोटालाई भिसा दिइएको थिएन, अर्थात भिसा दिइएपनि अमेरिका पुगेपछि विमानस्थलबाट फर्काइन सक्छ भनिएको थियो, त्यसपछि भने उनलाई सहानुभुति राख्ने माओवादी नेताहरु आगो भएको हुनुपर्छ । त्यसो त भिसा नदिन आग्रह गर्ने मानवअधिकारसम्बद्ध संस्थाहरु पनि के कम, भिसा रद्द गराएपछि उनीहरु र माओवादीका विपक्षीहरु पनि मख्ख होलान् । यही विषयलाई लिएर प्रचण्डले राजदुत डेलिसीसँग पनि कुरा गरेका छन् रे । माओवादी र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि सधैं बिचरा नै रहने भयो । -महेन्द्र ।
June 26, 2010 6:29 am
ढुंगा पल्टाएर आक्रमण गर्ने कार्यकर्ता
पुरानो समयमा नेपालमा अंग्रेज सेना आएर आक्रमण गर्दा भीरबाट ढुंगा बर्साएर भएपनि पछाडि हट्न बाध्य पार्ने रणनीतिको झल्को आउने गरी एकीकृत माओवादी कार्यकर्ताले गोरखमा अर्को प्रतिस्पर्धी दल काँग्रेसका कार्यकर्ता कुटे । गोर्खाको आलेमा भएको आक्रमणबाट १० जना कांग्रेस कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । त्यो बाहेक लुकेर बसेका माओवादीले खुकुरी, लाठी र रडले आक्रमण गरी युद्धकालको झझल्को पनि दर्शाएका छन् ।
बिचरा ती घाइतेहरुको उपचार जिल्ला अस्पतालमा भइरहेको छ अरे । यो विवादको चुरो कहाँसम्म पुगेको छ भने यो आक्रमणको जिम्मा एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले लिनुपर्छ भनेर काँग्रेस कार्यकर्ताले भनेका छन् । यो घटना त भयो, तर यो केन्द्रीय सत्ताको विषयलाई भइरहेको हो कि भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने ती दलका शीर्ष नेताहरु पनि आरोप प्रत्यारोपमा कम छैनन् ।
यही समयमा एकीकृत माओवादीले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार काम चलाऊ सरकारमा परिणत नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिने निर्णय गरेको छ । बिचरा सरकार पो जे गरेपनि दबाबमा पर्ने भो । किनभने दलहरु सहमतिमा पुग्नका लागि आफ्नै दाउ हेरेर बस्ने तर प्रधानमन्त्री र उनका मातहतका मन्त्रीहरुले गाली खानुपर्ने ।
एकीकृत माओवादीबाट कसैले कुटाई र गाली खान्छ भने त्यो असामान्य त भएन । किनभने गाली शिरोमणिको नाम पाएका माओवादी नेता कार्यकर्ताले सकेसम्म कुट्छन् नभए गाली गरिहाल्छन । त्यो गाली खानेमा पत्रकारहरु परे यसपालि । प्रधानमन्त्रीको विषयलाई लिएर प्रसारित प्रकाशित समाचारलाई लिएर प्रचण्डले अतिरञ्जन भएको पो भने ।
अमेरिकाबाट सधै पेलिएको माओवादीको पोलिटव्युरो बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन डाक्नुपर्नेमा चर्को आवाज उठेपनि माओवादीले असोजमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बस्ने निर्णय समेत भएको छ रे । आन्तरिक कुरा मात्रै होइन, अमेरिका जानका लागि भिसा समेत लागीसकेका माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य अग्नी सापकोटालाई झुठा आरोप देखाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिने षडयन्त्र भएपछि अमेरिका प्रस्थान गरिसकेका अन्य सदस्यलाई पनि फिर्ता बोलाइएको प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिन भ्याए । त्यही भएर भनन सकिन्छ कि, ढुंगा पल्टाउने कार्यकर्ता पनि उस्तै, राजिनामा नदिएर सत्तामा बसिरहने नेताहरु पनि उस्तै, अमेरिका जान नदिने राजदुतावास पनि उस्तै । -महेन्द्र । माओवादी आक्रमणमा घाइते काँग्रेस कार्यकर्ता ।